Munyori Tom Morris anopindura zvakare: Kana Harry Potter akamhanya General Electric | Martech Zone
Ini handitende kuti zuva rinopfuura iro ini handisi kungoshamiswa nemhedzisiro yeInternet, Google, neSocial Networks pasirese. Izvo zvinogona kunzwika chaizvo 'geeky' asi ndasvika kumba nhasi uye ndakave nemutsa wakanaka kwazvo mhinduro kune yangu posvo nezve Tom Morris ' bhuku, Kana Harry Potter akamhanya General Electric. Izvo zvakangoita zuva rangu! Iyo yakazara posvo uye zvakataurwa kubva kuna Tom ndizvo pano.
Tom akanditengesa pabhuku rake, nekungova akanaka zvakakwana kuti atore nguva yekukwazisa nekupa nhoroondo pane rake bhuku. Kakawanda sei patinoona izvi nhasi? Handisati ndamboisa mari muhomwe yaTom, asi paakaona posvo yangu kuburikidza nemambure, aive akanaka zvekukwazisa. Kutora nguva kubva mune yake purogiramu yekupindura kune yangu positi kunondiudza kare kuti iro ruzivo rwandichaverenga mubhuku raTom richave kuzadzikisa kutaura zvishoma.
Sezvineiwo, ini ndakanga ndichangobva kumba kubva kuchitoro cheVerizon kwandakatenga foni yangu mwedzi mishoma yapfuura. Ndakamira mumutsara kwemaminetsi makumi mashanu nemashanu (hongu, ichokwadi), ndakasimuka padhesiki, ndokukurumidza kupihwa bhizinesi kadhi rine nhamba yefoni pane wandaida kufonera maererano nefoni yangu yakaputsika. Ndakapedza mari yakawanda nevarume ivavo, uye havana kana kutaridza kufara nekundiona!
Chinyorwa chepadivi… ndakanyora Tom uye ndichimuita jee ndichiseka kuti ndaisave fan waHarry Potter, asi anondivimbisa kuti handisi kuzonetseka. Akanyora kuti:
Iri bhuku rakanyorwa nenzira yekuti isazofungidzira ruzivo kana fenzi maererano naHarry Potter. Ini ndanzwa kubva kumasumbu evakuru vakuru vasina kumbobvira vaverenga izwi raPotter uye vanonyora vachirumbidza bhuku!
Kutenda neemail yako etsitsi! Ndinovimba iwe unowana iro nyowani bhuku rinozorodza inoverengeka uye richikurudzira kune ako ega mamwe maratidziro! Vamwe vakandiudza kuti chitsauko chemanyepo chaive chega chakakosha mutengo webhuku.
Ndatenda, Tom! Ive neshuwa yekutarisa kwandiri kumusoro kana iwe wasvika Indianapolis. Kofi iri pandiri!
Iyo Digg Mhedzisiro: Mhedziso… Zvinobatsira here?